Zvemutemo ziviso | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Kuzvibatsira Zviwanikwa ndezve portal network Mashoko Blog, kambani ndeyayo AB Internet Networks 2008 SL, CIF: B85537785, ine kero kuC / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
Unogona kutaura pa:
akadaro kero yepositi
iyo email udza mashoko (at) blog (pfungwa) ru
runhare (+34) 902 909 238
iyi fomu yekutaurirana
1 Dziviriro yedata rako
1.1 Inotarisira kurapwa
2 Kodzero dzako dzekuchengetedza data
2.1 Kodzero yekukanganwika uye kuwana kune yako data
2.2 Kuchengetwa kwedata
2.3 Chakavanzika uye kuchengetedzwa kwedata
2.4 Kuchengetedzwa kunotyoka
3 Ndeapi ruzivo rwatinotora kubva kuvashandisi uye nezvatinoishandisa
3.1 Rekodhi yemabasa ekugadzirisa data
3.2 Zvemukati zvakasimirwa kubva kune mamwe mawebhusaiti
3.3 pasocial network
3.4 Ma processor kunze kweEU
3.5 Kuzvipira uye zvisungo nevashandisi vedu
4.1.1 DART kuki
4.2 Webhu Bhikoni
4.3 Vanhu vatatu
4.3.1 Parizvino ino saiti inogadzira kushambadzira kwe:
5 Mutemo wemutemo wezviri mukati
5.1 Ruzivo nezvigadzirwa zveindasitiri kodzero
5.2 Mitemo uye kugadzirisa gakava
6 Zvatinotarisira kubva kuvashandisi
6.1 Zvekunze Zvinongedzo
6.3 Mimwe mamiriro ekushandiswa kweino webhusaiti
6.4 Arco kodzero yekushandisa
6.5 Kubviswa kwevimbiso uye mutoro
6.6 European chikuva chepamhepo kugadzirisa gakava
6.7 Mutemo unoshanda uye kutonga
6.8 Tichagara tichikwanisika: Kubata kwedu
6.9 Kugamuchirwa uye kubvumidzwa
6.10 Tsamba yekutengesa
Dziviriro yedata rako
Zvekuonana zvemunhu anotungamira: Miguel Ángel Gaton ane email yekubata miguel (at) actualityblog (dot) com
Kodzero dzako dzekuchengetedza data
Mashandisiro aungaita kodzero dzako: Unogona kutumira kutaurirana kwakanyorwa kuhofisi yakanyoreswa yeAB Internet Networks 2008 SL kana kukero yeemail inoratidzwa mumusoro weichi chiziviso chepamutemo, kusanganisira muzviitiko zvese ikopikopi yeID yako kana rimwe gwaro rekuzivisa rakadaro, kukumbira kushandiswa kweiyo kodzero dzinotevera:
Kodzero yekukumbira kuwana kune yako data: unogona kubvunza AB Internet Networks 2008 SL kana iyi kambani iri kubata data rako.
Kodzero yekukumbira kugadzirisa (kana zvisiri izvo).
Kodzero yekukumbira kudzikisira kurapwa kwako, mune izvo zviitiko zvinongochengetwa chete neAB Internet Networks 2008 SL yekurovedza muviri kana kudzivirira kwezvaanotaura.
Kodzero yekuramba kurapwa: AB Internet Networks 2008 SL inomira kubata iyo data nenzira yaunoratidza, kunze kwekunge uchimanikidza zvikonzero zvine musoro kana kurovedza kana kudzivirirwa kwezvavanogona kutaura kuti vanofanira kuramba vachirapa.
Kodzero yekutakurika kwedata: kana iwe uchida kuti data rako riongororwe neimwe fem, AB Internet Networks 2008 SL ichafambisa kutakurika kwedata rako kumaneja mutsva.
Kodzero yekudzima kwedata: Uye kunze kwekukosha kwepamutemo zvinodzimwa mushure mekusimbiswa kwako.
Mienzaniso, mafomu uye rumwe ruzivo nezvekodzero dzako: Yepamutemo webhusaiti yeSpanish Agency yeDziviriro Dhata
Mikana yekubvisa mvumo: Kana ukapa mvumo yechimwe chinangwa, une mvumo yekuibvisa chero nguva, pasina kukanganisa hunhu hwekurapa zvichibva pamvumo isati yabviswa.
Maitiro ekunyunyuta kuDare Rinodzora: Kana iwe ukafunga kuti pane dambudziko nenzira iyo AB Internet Networks 2008 SL irikubata yako data, unogona kunanga zvikumbiro zvako kuna Security Manager weAB Internet Networks 2008 SL (yakaratidzwa pamusoro) kana ku simba rekuchengetedza data zvinoenderana, kuva iyo Spanish Agency Yekuchengetedza Dhata, iyo yakaratidzwa muchiitiko cheSpain.
Kodzero yekukanganwika uye kuwana kune yako data
Panguva dzose, iwe unenge uine mvumo yekudzokorora, kupora, kusazivisa uye / kana kudzima, yakazara kana chikamu, iyo data yakachengetwa paWebhusaiti. Iwe unongofanirwa kutumira email kune contacto@actualidadblog.com uye uikumbire.
Yakakamurwa dhata: Iyo yakaparadzaniswa data ichachengetwa pasina nguva yekubvisa.
Dhata yevanonyorera kuchikafu ne e-mail: Kubva panguva iyo mushandisi anyorera kusvikira vazvinyora.
Dhata yevanonyorera kushambadziro: Kubva panguva iyo mushandisi anyorera kusvikira vazvinyora.
Mushandisi dhata yakadhindwa neAB Internet Networks 2008 SL kumapeji uye maprofiles mumasocial network: Kubva panguva iyo mushandisi anopa mvumo yake kusvikira vaibvisa.
Chakavanzika uye kuchengetedzwa kwedata
AB Internet Networks 2008 SL yakazvipira mukushandisa kwedata, ku remekedza zvakavanzika zvavo uye kuzvishandisa zvinoenderana nechinangwa chavo, pamwe nekutevedzera zvavanosungirwa kuti vazvichengete uye nekugadzirisa matanho ese ekudzivirira kushandurwa, kurasikirwa, kurapwa kana kuwana zvisiri pamutemo, zvinoenderana nezvakatemwa neRoyal Decree 1720 / 2007 yaDecember 21, iyo inobvumidza Mitemo yekusimudzirwa kweOrganic Mutemo 15/1999 waZvita 13, Kudzivirirwa kweDunhu Dhata.
Iwe unovimbisa kuti iyo yega data yakapihwa kuburikidza nemafomu ndeyechokwadi, uchisungirwa kutaura chero shanduko kwavari. Saizvozvowo, iwe unovimbisa kuti ruzivo rwese rwunopihwa runoenderana nemamiriro ako chaiwo, kuti zviri zvechizvino-zvino uye ndezvechokwadi.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuchengetedza yako data kuvandudzwa nguva dzese, uri wega unokonzeresa kusarongeka kana kunyepa kwedata rakapihwa uye nekukuvara kunogona kukonzerwa neizvi kuAB Internet Networks 2008 SL semuridzi wewebhu ino, kana kune vechitatu mapato nekuda kwe use of said.
AB Internet Networks 2008 SL inotora matanho akakwana ekuchengetedza kuti aone kuvepo kwehutachiona, kurwisa kwechisimba uye majekiseni emakodhi.
Zvisinei, iwe unofanirwa kuziva kuti nzira dzekuchengetedza dzemakomputa paInternet hadzina kuvimbika zvachose uye kuti, nekudaro, AB Internet Networks 2008 SL haigone kuvimbisa kusavapo kwemavhairasi kana zvimwe zvinhu zvinogona kukonzera shanduko mumasystem emakomputa. (software ne Hardware) yeMushandisi kana mumagwaro avo emagetsi uye mafaera arimo.
Kunyangwe izvi, kuyedza kuvimbisa kuchengetedzeka uye kuvanzika kwe data rako rega, iyo webhusaiti ine inoshanda yekuchengetedza system yekutarisa iyo inoshuma pane yega yega mushandisi chiitiko uye zvinogona kutyora mukuchengetedzeka kwemushandisi data.
Mukana wekuona chero kutyora, AB Internet Networks 2008 SL inoitisa zivisa vashandisi mukati menguva yakareba yeawa makumi manomwe nemaviri.
Ndeapi ruzivo rwatinotora kubva kuvashandisi uye nezvatinoishandisa
Zvese zvigadzirwa uye masevhisi anopiwa pawebhusaiti anoreva mafomu ekutaurirana, mafomu ekutaura uye mafomu ekuita kunyoreswa kwevashandisi, tsamba yekunyorera kunyorera uye / kana maodha ekutenga.
Iyi webhusaiti inogara ichida mvumo yekutanga yevashandisi kugadzirisa yavo yega data kune zvinangwa zvinoratidzwa.
Une kodzero yekutorera mvumo yako yekutanga chero nguva.
Rekodhi yemabasa ekugadzirisa data
Webhu uye kubata: Iyo webhusaiti ine SSL TLS v.1.2 encryption iyo inobvumidza yakachengeteka kutumira yedunhu rega kuburikidza neyakajairwa mafomu mafomu, akaitirwa pamaseva ayo AB Internet Networks 2008 SL yakabata kubva kuOccentus Networks.
Dhata rakaunganidzwa kuburikidza newebhu. Iyo yega data yakatorwa ichave inoenderana nekugadzirisa otomatiki uye inosanganisirwa mumafaira anoenderana ari eAB Internet Networks 2008 SL.
Tichagamuchira IP yako, iyo ichashandiswa kuongorora kwayakabva meseji iyi kuti ikupe ruzivo, dziviriro kumashoko eSAMP uye kuona zvisirizvo zvinogona kuitika (semuenzaniso: mapato anopikisana enyaya imwechete nyora pawebhusaiti kubva kune imwechete IP), nekudaro se data rakanangana neIP yako.
Saizvozvo, iwe unogona kutipa dhata rako kuburikidza neemail uye dzimwe nzira dzekutaurirana dzinoratidzwa muchikamu chekubata.
Mafomu Okupindura: Pawebhu pane mukana wekuti vashandisi vasiye zvirevo pane zvinyorwa zvesaiti. Pane cookie inochengeta iyo data yakapihwa nemushandisi kuitira kuti vasazopinze zvakare pakushanya kutsva kwega kwega uye zvakare email kero, zita, webhusaiti uye IP kero inounganidzwa mukati. Iyo data yakachengetwa paOccentus Networks maseva.
Kunyoresa Mushandisi: Hazvibvumirwi kunze kwekunge zvakumbirwa.
Fomu yekutenga: Kuti uwane izvo zvigadzirwa nemasevhisi anopiwa muzvitoro zvedu zvepamhepo, mushandisi ane fomu rekutenga zvichienderana nemamiriro ekubvumirana anotsanangurwa mumutemo wedu panodiwa ruzivo rwekufambidzana nerobhadharo. Iyo data yakachengetwa paOccentus Networks maseva.
Isu tinounganidza ruzivo nezve iwe panguva yekutarisa muchitoro chedu. Ruzivo urwu runogona kusanganisira, uye kwete izvi chete, zita rako, kero, email, runhare, ruzivo rwekubhadhara uye zvimwe zvakakosha kugadzirisa mirairo yako.
Iwo manejimendi yedata iri anotibvumidza ku:
Ndokutumira iwe yakakosha ruzivo nezve yako account / odha / sevhisi.
Pindura zvaunokumbira, zvichemo uye zvikumbiro zvekudzoserwa.
Maitiro ekubhadhara uye dzivisa hunyengeri hwekutengesa.
Gadzira uye gadzirisa account yako, ikupe technical uye yevatengi sevhisi, uye ongorora chako chitupa
Pamusoro pezvo, isu tinogona zvakare kuunganidza inotevera ruzivo:
Nzvimbo uye data reruwa (kusanganisira IP kero uye browser) kana iwe ukaisa odha, kana kana tichida kufungidzira mutero uye mari yekutumira zvinoenderana nenzvimbo yako.
Chigadzirwa mapeji anoshanyirwa uye zvemukati zvinotariswa apo chikamu chako chiri kushanda
Makomendi ako uye ongororo yechigadzirwa kana ukasarudza kuzvisiya.
Kero yekutumira kana iwe uchikumbira mari yekutumira usati waita iyo yekutenga apo chikamu chako chiri kushanda.
Zvakakosha makuki kuti uratidze zviri mukati memotokari yako apo chikamu chako chiri kushanda.
Email nephasiwedi yeakaundi yako kuti ikubvumire iwe kuwana account yako, kana iwe unayo.
Kana iwe ukagadzira account, isu tinochengeta zita rako, kero uye nhamba yefoni, kuti uzvishandise mune yako yemberi mirairo.
Tsamba dzenhau mafomu ekunyorera: AB Internet Networks 2008 SL inoshandisa Sendgrid, Feedburner kana Mailchimp tsamba yekuendesa tsamba, iyo inochengeta yako email data, zita uye kugamuchirwa kwekunyorera. Iwe unogona kuzvinyoresa kubva kutsamba yenguva chero nguva kuburikidza nechero chinongedzo chiri pazasi pega pega pekutumira chaunogamuchira
Imeyili: Yedu email sevhisi inopa Sendgrid.
Instant mameseji: AB Internet Networks 2008 SL haipe rubatsiro kuburikidza nekutumira mameseji akadai seWhatsApp, Facebook Messenger kana Line.
Vatapi vebasa rekubhadhara: Kubudikidza newebhu, iwe unogona kuwana, kuburikidza nehukama, kune echitatu-bato mawebhusaiti, senge PayPal o mutsetse, Kubhadhara mari yebasa rakapihwa neAB Internet Networks 2008 SL. Hapana nguva iyo AB Internet Networks 2008 SL vashandi vane mukana wekuwana iwo ruzivo rwebhangi (semuenzaniso, kiredhiti kiredhiti nhamba) iwe yaunopa kune vakadaro vechitatu mapato.
Zvemukati zvakasimirwa kubva kune mamwe mawebhusaiti
Zvinyorwa pawebhu zvinogona kusanganisira zvemukati zvakasimwa (semuenzaniso mavhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, nezvimwewo). Zvemukati zvakaburitswa kubva kune mamwe mawebhusaiti zvinoita nenzira imwechete sekunge mushanyi ashanyira imwe webhusaiti.
Aya mawebhusaiti anogona kuunganidza dhata pamusoro pako, shandisa makuki, kupinza yechitatu-bato kuteedzera, uye nekuongorora kudyidzana kwako nezvakadzika midzi, kusanganisira kuteedzera kudyidzana kwako nezvakadzika midzi kana iwe uine account kana wakabatana kune iyo webhusaiti.
Mamwe masevhisi: Mamwe masevhisi anopihwa kuburikidza newebhusaiti anogona kunge aine mamwe mamiriro pamwe nezvakatarwa zvine chekuita nezve kuchengetedzwa kwe data rako. Izvo zvakakosha kuti uverenge uye uigamuchire usati wakumbira sevhisi iri mubvunzo.
Chinangwa uye chepamutemo: Icho chinangwa chekugadzirisa iyi data ichave chete yekukupa iwe iyo ruzivo kana masevhisi iwe aunokumbira kwatiri.
Kuvapo mumasaiti: AB Internet Networks 2008 SL ine profiles pane mamwe makuru enetiweki pasocial network paInternet.
Chinangwa uye chepamutemo: Mushonga unoitwa neAB Internet Networks 2008 SL iine data mukati meimwe netiweki dzambotaurwa ichave, kunyanya, iyo inobvumidzwa nesocial network kumaprofayiri emakambani. Nekudaro, AB Internet Networks 2008 SL inogona kuzivisa, kana mutemo usingazvirambidze, vateveri vayo nenzira dzipi nedzipi dzinobvumidzwa pasocial network nezve zviitwa, mharidzo, kupa, pamwe nekupa sevhisi yakasarudzika.
Kuburitsa dhata: Hapana kana mukana wekuti AB Internet Networks 2008 SL ichatora dhata kubva pasocial network, kunze kwekunge mvumo yemushandisi yawanikwa chaizvo uye zvakajeka kuti zviite saizvozvo.
Kodzero: Kana, nekuda kwehunhu chaihwo hwemasocial network, iko kushanda kwakanaka kwekodzero dzekuchengetedza dhata remuteveri kuri pasi pekushandurwa kwehunhu hweizvi, AB Internet Networks 2008 SL ichakubatsira nekukuyambira iwe kusvika ipapo kusvika pamwero yemikana yayo.
Ma processor kunze kweEU
Email. AB Internet Networks 2008 SL email service inopihwa uchishandisa Sendgrid services.
Masocial network. AB Internet Networks 2008 SL inoshandisa maAmerican social network YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard iyo inoitiswa data yepasi rese, yekuongorora uye hunyanzvi maererano newebhusaiti iri pamaseva ayo mu iyo AB Internet Networks 2008 SL inobata iyo data iyo, kuburikidza navo, vashandisi, vanyoreri kana vafambisi vechikepe vanounza kune yakasimba AB Internet Networks 2008 SL kana kugovana nayo.
Vanopa mari. Saka kuti iwe ugone kubhadhara kuburikidza PayPal o mutsetse, AB Internet Networks 2008 SL ichatumira iyo yakanyatso dikanwa data yeavo kune aya ekubhadhara ma processor ekuti uburitse inoenderana yekubhadhara chikumbiro.
Ruzivo rwako runochengetedzwa zvinoenderana neyedu zvakavanzika uye makuki mutemo. Nekushandisa kunyorera kana kupa ruzivo rwako rwekubhadhara, iwe unonzwisisa uye unogamuchira yedu zvakavanzika uye nekuki mutemo.
Iwe uchagara uine kodzero yekuwana, kugadzirisa, kudzima, kuremerwa, kutakurika uye kukanganwa data rako.
Kubva panguva yaunonyoresa semushandisi pane ino webhusaiti, AB Internet Networks 2008 SL inokwanisa kuwana: Username neemail, IP kero, kero yepositi, ID / CIF neruzivo rwekubhadhara.
Chero zvazvingaitika, AB Internet Networks 2008 SL inochengetera kodzero yekushandura, chero nguva uye pasina ziviso isati yasvika, asi kuzivisa, kuratidzwa nekugadziriswa kwewebhusaiti seichi chiziviso chepamutemo.
Kuzvipira uye zvisungo nevashandisi vedu
Kuwana uye / kana kushandiswa kweino webhusaiti hunhu kune chero munhu anozviita mamiriro emushandisi, kubvuma, kubva panguva ino, zvizere uye pasina kubvisirwa, chiziviso ichi chepamutemo maererano nemamwe masevhisi nezviri mukati mewebhusaiti.
Mukushandisa kwewebhu ino webhusaiti, mushandisi anozvipira kusaita chero hunhu hunogona kukuvadza mufananidzo, zvido uye kodzero dzeAB Internet Networks 2008 SL kana yechitatu mapato kana izvo zvinogona kukuvadza, kuremadza kana kuwandisa portal kana kudzivirira , chero zvazviri, iko kushandiswa kwewebhu.
Yedu yekuvanzika inotsanangura maitiro atinounganidza, kuchengetedza kana kushandisa ruzivo rwatinotora kuburikidza akasiyana masevhisi kana mapeji anowanikwa pane ino saiti. Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti ndeupi ruzivo rwatinotora uye nemashandisiro atinoita isu kubvira kuwana ino saiti kunoreva kubvuma kwedu zvakavanzika mutemo.
Kuwana pairi kunogona kusanganisira kushandiswa kwe Cookies. The Cookies Iwo madiki mashoma eruzivo ayo akachengetwa mubrowser anoshandiswa nemumwe neumwe mushandisi kuitira kuti server irangarire rumwe ruzivo irwo rwaunogona kushandisa gare gare. Ruzivo urwu rwunotibvumidza kukuzivisa iwe semumwe mushandisi uye rinokutendera iwe kusevha zvaunofarira iwe, pamwe neruzivo rwehunyanzvi senge kushanya kana chaiwo mapeji aunoshanyira.
Vaya vashandisi vasingade kugamuchira Cookies kana kuda kuziviswa zvisati zvachengetwa pakombuta yako, unogona kumisikidza browser rako nechinangwa ichi.
Mazhinji emabhurawuza anhasi anotendera manejimendi e Cookies munzira nhatu dzakasiyana:
ari Cookies hazvitombogamuchirwa.
Bhurawuza rinobvunza mushandisi kana ichifanira kugamuchira yega kudzayi.
ari Cookies zvinogamuchirwa nguva dzose.
Bhurawuza racho rinogona zvakare kusanganisira kugona kutsanangura zviri nani Cookiesinofanirwa kugamuchirwa uye isiri iyo. Kunyanya, mushandisi anogona kazhinji kugamuchira chero yeanotevera sarudzo:
ramba iyo Cookies yemamwe matunhu;
ramba iyo Cookies kubva kumapati echitatu;
accept Cookies sevasingapfuurire (vanobviswa kana bhurawuza ravharwa);
tendera server kugadzira Cookies yedunhu rakasiyana.
Google, semubatsiri wemubatsiri, inoshandisa makuki kushambadzira pawebhu.
Unogona kudzima kushandiswa kweiyo DART kuki kubva kuGoogle ad system nekuwana iyo Google yekuvanzika nzvimbo.
Pamusoro pezvo, mabhurawuza anogona zvakare kubvumira vashandisi kuti vaone uye vadzime Cookies mumwe nemumwe.
Iwe une rumwe ruzivo nezve Cookies uye: Wikipedia
Saiti iyi inogona zvakare kuitisa web beacons (inozivikanwawo se webhu tsikidzi). Iyo web beacons Iwo anowanzo kuve madiki mifananidzo epikiseli imwe nepikisi imwe, inoonekwa kana isingaonekwe, yakaiswa mukati mekodhi kodhi yemapeji ewebhu ewebhusaiti. Iyo web beacons serve uye zvinoshandiswa nenzira yakafanana ku Cookies. Mukuwedzera, iyo web beacons Ivo anowanzo shandiswa kuyera traffic yevashandisi vanoshanyira peji rewebhu uye kugona kuwana maitiro evashandisi vesaiti.
Iwe une rumwe ruzivo nezve web beacons uye: Wikipedia
Mune zvimwe zviitiko, isu tinogovana ruzivo nezvevashanyi vesaiti ino tisingazivikanwe kana mubatanidzwa nevechitatu mapato senge vashambadzi, vanotsigira kana ma Auditor nechinangwa chega chekuvandudza masevhisi edu. Zvese izvi zvekugadzirisa mabasa zvichagadziriswa maererano nemitemo yepamutemo uye kodzero dzako dzese maererano nekuchengetedzwa kwedata dzicharemekedzwa zvinoenderana nemirau yazvino.
Saiti ino inoyerera traffic nemhinduro dzakasiyana dzaunogona kushandisa Cookies o web beacons kuongorora zvinoitika pamapeji edu. Isu parizvino tinoshandisa mhinduro dzinotevera kuyera traffic yeiyi saiti. Unogona kuona rumwe ruzivo nezve zvakavanzika mutemo wega wega wemhinduro dzinoshandiswa pachinangwa ichi:
Google (Analytics): Google Analytics Yakavanzika Policy
Automattic / Quantcast (JetPack Stats) Automattic yakavanzika mutemo y Quantcast.
Disqus (kutaura system): Disqus yega yega
Ino saiti inogona zvakare kuitisa yayo yega kushambadzira, vanobatana, kana kushambadzira network. Uku kushambadza kunoratidzwa nemaseva ekushambadza anoshandisa zvakare Cookies kuratidza zvine chekuita nezveshambadziro kune vashandisi. Imwe yeaya maseva ekushambadzira ane yavo yega yekuvanzika, iyo inogona kubvunzwa pamapeji ayo ewebhu.
ari Cookies Iwo mafaera akagadzirwa mubrowser remushandisi kunyora zviitiko zvavo paWebhusaiti uye kubvumira kuwanda kwemvura uye kwakasarudzika.
Cookie zita Chinangwa Mamwe mashoko
__utmz Iyo inounganidza isingazivikanwe ruzivo nezve kufamba kwevashandisi kuburikidza newebhusaiti kuti uzive mabviro ekushanya uye imwe yakafanana data data. Isu hatisi kushandisa makuki aya. - Google Yakavanzika Center
-Google Analytics yekubuda-plugin
Google Adsense, Dzvanya kaviri, DART __gads Inounganidza ruzivo nezve mushandisi wekushandisa kushandira kushambadzira - Mutemo weGoogle Adsense zvakavanzika
Automattic, Quantcast uye Disqus __qta
testCookie Iyo inounganidza isingazivikanwe ruzivo nezve kufamba kwevashandisi kuburikidza newebhusaiti kuti uzive mabviro ekushanya uye imwe yakafanana data data. - Quantcast Yakavanzika Policy
Wedzerai __atuvc Iyo __atuvc cookie inoshandiswa neAddthis yekugovana magariro system kuona kuti vashandisi vanoona yekudyidzana yekugovana counter inopindirwa mumagariro mabhatani ewebhu webhusaiti zvakagadziridzwa. - Inowedzera mutemo wepachivande
Kuti ushandise iyi Webhusaiti hazvidiwe kuisa Cookies. Mushandisi haagone kuzvigamuchira kana kumisikidza bhurawuza ravo kuti ridzivharise uye, pazvinenge zvakakodzera, zvivabvise.
Twitter cookie, sezvakapihwa mune yako zvakavanzika mutemo uye kushandiswa kwemakuki.
Facebook cookie, sezvakapihwa mune yako Cookies mutemo
Google+ neGoogle Maps kuki, sezvakapihwa papeji rayo nezve chii mhando yemakuki anoshandiswa
Pinterest kuki, sezvakapihwa mune yako Yakavanzika mutemo uye kushandiswa kwemakuki
Gravatar cookie, sezvakapihwa mu mutemo wega wega wekambani Automattic.
Parizvino ino saiti inogadzira kushambadzira kwe:
Google Adsense: Mutemo weGoogle Adsense zvakavanzika - Terms uye mamiriro -Zvirongwa zvePurogiramu
Adconion: Adconion zvakavanzika mutemo
Google DFP: Mutemo weGoogle DFP wega wega.
Buysellads: Mutemo weBuysellads wega wega - Terms uye mamiriro
Taboola: Taboola zvakavanzika mutemo.
Mutemo wemutemo wezviri mukati
Iyo saiti ine zvinyorwa zvakagadzirirwa chete zvinodzidzisa kana zvinodzidzisa zvinangwa izvo zvingangoratidze mamiriro azvino emutemo kana mutemo uye izvo zvinoreva mamiriro akajairika, saka zvirimo hazvigone kushandiswa nemushandisi kune mamwe mamiriro.
Maonero akataurwa mavari haanyatso kuratidza maonero eAB Internet Networks 2008 SL.
Zvemukati zvezvinyorwa zvakaburitswa saiti hazvigone kutariswa, chero zvazvingava, chinotsiva chezvemutemo kuraira.
Mushandisi haafanire kuita maererano neruzivo rwuri mune saiti pasina kutanga ashandisa kune inoenderana yenyanzvi kuraira.
Ruzivo nezvigadzirwa zveindasitiri kodzero
Kubudikidza neMaitiro Akawanda, hapana huchenjeri kana kodzero yezvivakwa zveindasitiri inoendeswa kune iyo portal kana kune chero chinhu chayo chezvinhu, kubereka, shanduko, kugovana, kutaurirana neruzhinji, kupa kuti ruzhinji, kuburitsa, kushandisazve, kurambidzwa zvakajeka kune Mushandisi. kuendesa mberi kana kushandisa chero hupi hupi hupi, nenzira ipi neipi kana maitiro, ehumwe hwazvo, kunze kwekunge pazvinotenderwa zviri pamutemo kana kupihwa mvumo nemubati wekodzero dzinoenderana.
Mushandisi anoziva uye anogamuchira kuti iyo webhusaiti yese, iine asi isingazadzise iwo mavara, mifananidzo, dhizaini, software, zvemukati (kusanganisira chimiro, kusarudzwa, kurongeka uye kuratidzwa zvakafanana), audiovisual zvinhu nemifananidzo, zvinodzivirirwa ne zviratidzo zvekutengeserana, kodzero dzekodzero uye dzimwe kodzero dzepamutemo dzakanyoreswa, zvinoenderana nezvibvumirano zvepasirese izvo Spain bato nedzimwe kodzero dzepfuma nemitemo yeSpain.
Muchiitiko chekuti mushandisi kana wechitatu anofunga kuti kwave nekutyorwa kwekodzero dzavo dzepamutemo dzehungwaru nekuda kwekuunzwa kwezvimwe zvirimo pane saiti, vanofanirwa kuzivisa AB Internet Networks 2008 SL yemamiriro ezvinhu akadaro, zvichiratidza:
Data rako remunhu anofarira anobata kodzero dzinonzi dzakatyorwa, kana kuratidza chinomiririra chaanoshanda nacho kana nyaya yacho yaunzwa nemumwe wechitatu asiri iye anofarira.
Ratidza zvirimo zvakachengetedzwa nekodzero yemidziyo nenzvimbo yadzo panzvimbo iyi, kubvumidzwa kwekodzero dzehungwaru dzakaratidzwa uye chirevo chinoratidza umo munhu anofarira anoona nezvechokwadi cheruzivo rwakapihwa mukuzivisa.
Mitemo uye kugadzirisa gakava
Mamiriro ezvinhu aripo ekushandisa saiti anotongwa mune yega yega yega yekunyanyisa nemutemo weSpain. Mutauro wekunyora nekududzira ichi chiziviso chepamutemo chiSpanish. Ichi chiziviso chepamutemo hachizonyorerwa zvakasiyana kune mumwe nemumwe mushandisi asi chinoramba chichiwanikwa kuburikidza neInternet pawebhu.
Vashandisi vanogona kuendesa kune iyo Consumer Arbitration System iyo iyo AB Internet Networks 2008 SL ichave chikamu chekugadzirisa chero kukakavara kana chikumbiro chakatorwa kubva mune ino zvinyorwa kana kubva kune chero chiitiko cheAB Internet Networks 2008 SL, kunze kwekugadzirisa kusawirirana kunokonzera kukura kwe chiitiko chinoda kuve nhengo, mune iyo mamiriro mushandisi anofanira kuenda kune inoenderana muviri wesangano rakakodzera remabhawa.
Vashandisi vane chinzvimbo chevatengi kana vashandisi sekutsanangurwa nemitemo yeSpain uye vanogara muEuropean Union, kana vakave nedambudziko nekutenga kwepamhepo kwakaitwa kuAB Internet Networks 2008 SL, kuyedza kusvika pachibvumirano chekunze kwedare kunogona kuenda ku Pamhepo Dispute Resolution Platform, Yakagadzirwa neEuropean Union uye yakagadziriswa neEuropean Commission pasi pe Mutemo (EU) 524/2013.
Kunze kwekuti mushandisi asiri mutengi kana mushandisi, uye kana pasina mutemo unosungira neimwe nzira, mapato anobvumirana kuendesa kuMatare neMatare eMadrid capital, sezvo ino ndiyo nzvimbo yekupedzisa chibvumirano, zvichimiririra chero humwe hutongi hunogona kuenderana navo.
Zvatinotarisira kubva kuvashandisi
Iko kuwana uye / kana kushandiswa kweizvi kune chero munhu anoita mamiriro eMushandisi, achibvuma, kubva panguva ino, zvizere uye pasina kupihwa kupi, chiziviso ichi chepamutemo, pamwe nemamiriro ezvinhu ayo, pazvinenge zvakakodzera, achizadzisa, mu hukama nemamwe masevhisi nezviri mukati meiyo portal.
Mushandisi anoziviswa, uye anobvuma, kuti kupinda kune ino webhusaiti hazvireve, munzira ipi neipi, kutanga kwehukama hwekutengesa neAB Internet Networks 2008 SL. Nenzira iyi, mushandisi anobvuma kushandisa iyo webhusaiti, masevhisi ayo nezviri mukati pasina kutyora mutemo uripo, kutenda kwakanaka uye nerunyararo ruzhinji. Iko kushandiswa kwewebhusaiti nekuda zvisiri pamutemo kana zvinokuvadza zvinangwa, kana izvo, neimwe nzira, zvinogona kukuvadza kana kudzivirira kujairika kushanda kwewebhusaiti kunorambidzwa. Nezve zvirimo mune ino webhusaiti, zvinorambidzwa:
Kuburitsa kwaro, kugovera kana kuchinjisa, izere kana chikamu, kunze kwekunge iine mvumo yevaridzi vayo zviri pamutemo.
Chero kuputswa kwekodzero dzeanopa kana varidzi vechokwadi.
Kushandiswa kwayo kwezvinangwa zvekushambadza kana zvekushambadza.
Iwo mapeji ewebhusaiti anopa zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti uye zvemukati zviri zvevamwe mapato, vagadziri kana vanotengesa.
Chinangwa chega chemubatanidzwa ndechekupa Mushandisi mukana wekuwana maratidziro akati uye kuziva zvigadzirwa zvedu, kunyange hazvo AB Internet Networks 2008 SL isina basa mune chero mhedzisiro yemhedzisiro inogona kutorwa kumushandisi nekuwana zvakataurwa zvinongedzo.
Mushandisi uyo anotarisira kumisikidza chero hunyanzvi hwekushandisa chinongedzo kubva kune yake webhusaiti kuenda kune portal anofanirwa kuwana mvumo yakanyorwa yakanyorwa yeAB Internet Networks 2008 SL.
Kumisikidzwa kweiyi link hakureve mune chero mamiriro ezvinhu kuvapo kwehukama pakati peAB Internet Networks 2008 SL uye muridzi wesaiti panosimbiswa chinongedzo, kana kugamuchirwa kana kugamuchirwa neAB Internet Networks 2008 SL yezviri mukati kana masevhisi. .
Basa re kudzokorora kana kubva kune vakadaro vateereri veAdWords vanotibvumidza isu kusvika vanhu vakamboshanyira webhusaiti yedu uye kuvabatsira kupedzisa maitiro avo ekutengesa.
Sewe mushandisi, iwe paunopinda webhusaiti yedu, isu tichaisa yekumisikidza cookie (inogona kubva kuGoogle Adwords, Criteo kana mamwe masevhisi ayo anopa kumakisazve).
Iyi cookie inochengetera ruzivo rwevashanyi, senge zvigadzirwa zvavakashanyira kana kana vakasiya ngoro yekutengera.
Kana mushanyi akasiya webhusaiti yedu, iyo yekumisikidza cookie inoenderera mubrowser yavo.
Mimwe mamiriro ekushandiswa kweino webhusaiti
Mushandisi anozvipira kushingairira webhusaiti uye masevhisi anowanikwa mairi, achitevedzera zvizere Mutemo, tsika dzakanaka uye chiziviso ichi chepamutemo.
Zvimwechetezvo, inoitisa, kunze kwekunge yapfuura, kuratidza uye kunyorwa mvumo yeAB Internet Networks 2008 SL kushandisa ruzivo rwuri muwebhusaiti, chete ruzivo rwako, kusakwanisa kunyatsoita kana zvisina kunangana kuita zvebhizimusi zvekushandisa mune zvarinazvo. kuwana.
Saiti ino inochengetera faira re data rine chekuita nemashoko akatumirwa kune ino saiti. Unogona kushandisa kodzero dzako dzekuwana, kugadzirisa, kudzima kana kupikisa nekutumira email kukero yekuonana (pa) actualblog (dot) com.
Saiti ino, inosanganisirwa madomeni uye muridzi wezviri mukati ndezveAB Internet Networks 2008 SL.
Iyi webhusaiti ine ma hyperlink anotungamira kune mamwe mawebhusaiti anotarisirwa nevechitatu mapato kunze kwesangano redu. AB Internet Networks 2008 SL haivimbisi uye haina basa nezviri mukati zvinounganidzwa pamapeji ewebhu akadaro.
Kunze kwekutaura kwakatemerwa, kwekutanga uye kwakanyorwa kubva kuAB Internet Networks 2008 SL, kubereka, kunze kwekushandisa zvakavanzika, shanduko, uye nechero imwe nzira yekushandisa, nechero nzira, yezvose kana chikamu chezviri mukati ino webhusaiti.
Izvo zvakarambidzwa zvachose kuita, pasina mvumo yekutanga yeAB Internet Networks 2008 SL, kumwe kunyengera kana shanduko yewebhusaiti ino. Nekudaro, AB Internet Networks 2008 SL haingatore chero mutoro wakatorwa, kana izvo zvinogona kumuka, kubva mukuchinjika uku kana kushandiswa nevanhu vechitatu.
Arco kodzero yekushandisa
Iwe unogona kurovedza muviri, uchiremekedza iyo data yakaunganidzwa, kodzero dzinozivikanwa muOrganic Mutemo 15/1999, yekuwana, kugadzirisa kana kudzima kwedata uye kupikisa. Nechikonzero ichi ndinokuzivisa kuti iwe unogona kushandisa kodzero idzi kuburikidza nechikumbiro chakanyorwa uye chakasainwa chaunogona kutumira, pamwe nekopikopi yeID yako kana gwaro rekuzivisa rakaenzana, kukero yepositi yeAB Internet Networks 2008 SL kana neemail, yakanamatira kopi yeID ku: (pa) actualityblog (dot) com. Pamberi pemazuva gumi tichapindura kuchikumbiro chako chekusimbisa kuitiswa kwekodzero yawakumbira kushandisa
Kubviswa kwevimbiso uye mutoro
AB Internet Networks 2008 SL haipe chero vimbiso uye haina basa, chero zvodii, zvekukuvadzwa kwerudzi rupi nerupi kunogona kukonzerwa ne:
Iko kushomeka kwekuwanika, kugadzirisa uye kushanda kwakanaka kwewebsite kana masevhisi ayo uye zvirimo;
Kuvapo kwehutachiona, zvirongwa zvakashata kana zvinokuvadza zvirimo;
Iko kusiri kwepamutemo, kusaitira hanya, hunyengeri kana kushandisa zvinopesana neichi cheMutemo ziviso;
Iko kushayikwa kwemaitiro, mhando, kuvimbika, kubatsira uye kuwanikwa kwemasevhisi akapihwa nevanhu vechitatu uye kwakaitwa kuti vashandiswe pane webhusaiti.
AB Internet Networks 2008 SL haina mhosva chero ipi zvayo mamiriro ekukuvadzwa kunogona kubva mukushandiswa zvisiri pamutemo kana zvisina kunaka kwewebhusaiti ino.
European chikuva chepamhepo kugadzirisa gakava
Komisheni yeEuropean inopa online online resolution resolution iyo inowanikwa pane inotevera chinongedzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vatengi vachakwanisa kuendesa zvichemo zvavo kuburikidza nepamhepo yekugadzirisa gakava papuratifomu
Mutemo unoshanda uye kutonga
Kazhinji, hukama huripo pakati peAB Internet Networks 2008 SL nevashandisi vayo telematic services, iripo pane ino webhusaiti, iri pasi pemitemo yeSpanish nemasimba.
Tichagara tichikwanisika: Kubata kwedu
Kana chero mushandisi akave nekusahadzika nezve aya mamiriro epamutemo kana chero chirevo nezve portal, ndokumbira utange (ku) actualblog (dot) com.
Kugamuchirwa uye kubvumidzwa
Mushandisi anozivisa kuti akaudzwa nezve mamiriro ekuchengetedza dhata remunhu, kubvuma uye kubvuma kurapwa kwacho neAB Internet Networks 2008 SL, nenzira uye nezvinangwa zvinoratidzwa mune ino yega yega.
Zvinoenderana nemutemo uripo iye zvino, AB Internet Networks 2008 SL haiite miitiro yeSAMP, saka haitumire emaimeri ekutengesa ayo asina kumbobvunzwa kana kupihwa mvumo nemushandisi. Nekudaro, mune yega yega mafomu pawebhu, Mushandisi ane mukana wekupa mvumo yake yekugamuchira Newsletter / Bulletin, zvisinei neruzivo rwekutengesa rwakakumbirwa.
Gamuchira izvo zvazvino zvinyorwa zvekuzvivandudza, kusimudzira pachako uye psychology.